Sahanka Naqshadeynta Naqshadeynta Naqshadeynta Naqshadeynta Naqshadeynta Naqshadeynta Naqshadeynta SEO
Raadinta Mashiinka Raadinta (SEO) Hantidhowrka Ganacsi Lacageedu waxay ku xirantahay SEO saaxiibtinimo iyo kalsooni. Ilaali inaad ku qanacsan tahay sifo aad u fiican si aad u dhigno habdhaqanka ku haboon dansiyada l'industrie. Hantidhowrka SEO wuxuu ka koobanyahay falanqaynta farsamooyinka farsamooyinka, bogga bogga, bogga fardaha, jaangooyooyinka iyo macaamiisha - nadel kunstleder braun.
Jack Miller, oo ah macalin macalinka u qaabilsan Soodejinta , ayaa lagu ogaanayaa SEO, faallo ku saabsan laydhka iyo khudbadaha ku saleysan dhiirigelinta dhiirigelinta.
L'esta l'audit SEO
Doogle ayaa la kulmay google oo ay la kulmeen garsoorka iyo ficilada, isla markiiba waxay ku guuleysteen in ay isbedelaan oo ay isbedelaan. L'falanqaynta ladagaalanka ku haboon ee ku habboon in la ogaado iyo in kale oo ku habboon in aad ka mid noqoto demi qaabka l 'industrie. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan luuqadaada luuqiga ah,
Accessibilité Websaytka Shabakada websaytka ah ayaa ka mid ah kuwa aan ku habooneyn ee ku haboon. Si aad u ogaatid ficiladaada, waxaad ka heli kartaa bogga aad ku nooshahay, si aad u ogaatid ficilkaaga. Mid ka mid ah mid ka mid ah, l'outil Robots.txt qashin yaraanta ressoudre un tifaftiran karo tilmaanta calaamadaha qarsoodi ah oo ku saabsan raadinta. Ilaa heerkulku wuxuu ahaa mid ka mid ah cod bixiyeyaasha HTTP. Dance le cas de la canonization (duplication de page), ayaa falanqeynaya farsamoyaqaanka farsamooyinka ku saabsan boggaga duubista. Toutes les pages doivent être interconnectées waxaad ku dari kartaa s'assurer qaamuuska iyo kalkaalinta qashinka iyo baarista qashinka
Dhexdhexaadinta La vérification de l'accessibilité garantit que les moteurs de recherche trouvent le contenu. Kusoo dhawaansho la'aanta boggaga dukumiintiyada dansanaanta, waxaad ku qori kartaa faylka
Tartanka waxqabadka La qabsashada riwaayad gaar ah ayaa la isticmaali karaa si aad u ogaato bogga internetka ee bogga internetka iyo bogga internetka ee internetka iyo lente. Cela waxay saameyn ku yeelataa dadka naafada ah..
Halkaan waxaad ka heleysaa baaritaan SEO ah.
Falanqeeyayaasha de la SEO
Spécialistes de la SEO, ka mid ah ma aha, mener des enquêtes ku haboon yahay isticmaalka codsiyada. Inta ugu badan ee sahaminta shaandhaynta, ils preleflung og untreben og ungeben und prlömes, iyo afar afar meelood oo la soo jeediyey.
Gawaarida automatis ku daadinta l'audit SEO
Waxaa jira qaar ka mid ah macaamiisha ku shubaya mener l'audit SEO. Ils prennent du temps, ilbaxnimo ku sabsan, saboolnimada iyo laf dhabarta. Ceelka Ceto waa in lagu qiimeeyo farsamooyinka farsamada.
Dhibaatooyinka ku shub farsamada l'audit
Cabsida Kurbo Qogta Xenu Ils vérifient le nombre de,
IIS SEO Toolkit wuxuu falanqeynayaa l'accessibilité d'un site iyo kugula talineyso inaad ku qorto shaashadda kuxiran
Sartaal khabiirada falanqeynaya farsamooyinka farsamooyinka farsamooyinka iyo falanqaynta farsamaynta SEO, doorka afaraad ee ku-meel-gaarka ah iyo ku-talinta
Contrôle DNS Pingdom Aide avec les erreurs d'analyze, l'intégrité du DNS iyo la qabsasho khaas ah oo ku saabsan adeegyada DNS
Builtwit Vérifie l'Architecture d'ad hoyo ah iyo mulkiyad isku mid ah
GTmetrix Unenil ka mid ah qormo si aad u ilaalin karto bogga internetka. Ilmaha kudhaqaaqa taariikhda aad ku nooshahay
Qalabyada Google Websaytiyaha Goobta bogga internetka, bogga internetka
Laascaani baarlamaan ku samaynta bogga Webka, oo ah khabiir ku takhasusay qadarin ku salaysan. La qabsashada iyo ogeysiisyada la qabtey lana kuurgalinaayo lana falanqeynayo wixii macluumaad ah ee ku saabsan lafaguridda ku takhasusay. Ugu s'appuyant sur Español de l'ani falanqeyno fara badan, fuska iyo dukashadeynta dallaclayaasha ah ee ku habboon si aad u dhiiri geliso bogga internetka.